JINJIYADA GOOBAHA IYO QALABKA GERMAN, Jumladaha Jarmalka Easy Easy | Barashada Jarmalka, Jarmalka Barashada
Home » Jadwalka Jarmalka iyo Heshiisyada » Koorsada Kuraasta Jarmalka, Sida loo Dhiso Jarmalka Jarmal
Xarunta Waxbarashada Jarmalka
WAXBARASHADA INTERNETKA GERMAN. XARUNTA GERMANKU WAA MARKAAD KU SAMEEYSAAN.
XIGASHO, HALKAN HOOSE KA DHAGEYSO
GARSOORKA BOOLISKA GERMANNIGA, Tusaalooyin Ku Saabsan Jarmalka, Xukun Jarmal ah
Digniin: Si aad si buuxda u fahamto tan iyo mawduucyada soo socda, waxaad u baahan tahay inaad si fiican u fahamtid naxwaha Turkiga.
Culeysku waa qaab dhismeedeed oo fudud, haddii aad fiiro gaar ah u yeelato, isweydaarsiga mawduuca ayaa lagu arkay saddexda jumladood ee kor ku xusan.
Haddii weedhka weedhuhu aanu ku habboonayn xajinta, xukunku wuxuu noqdaa mid musuqmaasuq ah oo aan macno lahayn.
Cummings waa qashqashadoodu waa musuqmaasuqyo, Falalkii hore, sida laga soo xigtey qirashada ficilada ma aysan soo jiidan oo mowqifka la midoobin.
Tusaale ahaan, jumladaha musuqmaasuqa ah "Waxaan raaci doonaa aqoonsiga maaddada," waan tegi doonaa "ama sida ay u socoto," Way tagi doonaan ".
Waa hagaag, maaddaama xukunka mawduuca iyo mustaafka waa in uu had iyo jeer waafaqsan yahay, sidaas darteed waxaan ka heli karnaa fikrad ku saabsan mawduuca xukunka adoo eegaya runtii jumlada.
Jumlada "Waxaan imid, qofkii shaqeynaya (mawduuca) si sahlan ayaa loo fahmi karaa sida kan koowaad.
Mawduuca weedhka ayaad ku qortaa "waa" aad jeceshahay inaad fahanto.
Mawduuca qoraallada ay qorayaan waa "iyaga .."
Mawduucaaga ayaad imaanaysaa "waa adiga hadaba ..
Caqabadaha ficil ahaanta ah ee turjubaanka ah waa turjumaan-ama.
Jarmalka, suunka aan dhammaysnayn waa -en iyo mararka qaarkood -n.
MUUQAALKAN: Jumlada guud ee Hadalka Jarmalka, Jarmal Praktischer Sprachführer
Fikradaha Farsamada Turjubaanka ee Fiiliga Fikradaha Fikradaha labadaba waxay ku jiraan qaab aan xad lahayn.
Sida la arki karo, sida ku xusan ficilada kor ku xusan, dhammaadka aan dhammaadka lahayn waa kuwa ugu caansan Jarmalka iyo Makkana waa Turkiga.
Marka qofka ama nuxurka lagu daro ficil ahaan, suunka ciriiriga ah ayaa la tuuraa, qofka, saacadaha iwm ayaa la keenaa asal ahaanta falka.Aynu sharraxo tusaale ahaan.
Waxaan qaadannaa fiilooyin aan fiicnayn oo ficil ah si aan u akhristo waxaanna haynaa ereyga "aqi kalıy. Aynu keenno qofka keli ah ee suuban iyo su'aasha hadda.
Haatan waxan eegaynaa halkan, tusaale ahaan, aan ka qaadno ficillo aan akhrino oo akhrino.
Tani waxay ku xiran tahay qaab-dhismeedka naxwe ahaaneed waxayna sabab u tahay xaqiiqda ah in muddooyinka loo isticmaalo ay ka duwan yihiin.
Sida luuqadeena, nalalka aan dhammaadka lahayn ee Jarmalka waa laga saarayaa, waxaana lagu darayaa fiilooyinka falka.
Lern - e: Baro - bogsashada
Lern - t: Baro - fiican - adiga
Lernähe: Baro - di - m
Kordhinta farqiga ficilka ee ficillada yar.
MUUQAALKAN: Jarmalka Waqti Xaadirkan (Präsens) iyo Caaqil Jarmal
Sidii aan aragnay, waxaan ka saarnay fiilooyin aan fiicnayn oo ficilada ficilka ah iyo ficil ahaan u soo jiiday asalka fiilka iyadoo farta lagu daray.
WAA MAXAY ISKU DIIDMADA ISKUULKA?
Jarmal, waxaa jira fikrad ah ficil gacan-ka-hadal ah, ficillada kaalmadu waxay leeyihiin hawlo kala duwan oo ku jira jumlada. waa in loo adeegsadaa ficilka caadiga ah ee xukunka si ay u beddeli karaan waqtiga ama micnaha ficilka dhabta ah.
Haddii loo isticmaalo sida ficil caadi ah, waxay leeyihiin macne oo kali ah ayaa loo isticmaali karaa. Waxaan arki doonaa mawduuca ficil ahaanta faahfaahinta si faahfaahsan sida horukaca casharrada.
Waxaan kuu rajeyneynaa dhamaan guusha ...
RISALE-I NUR'AN VECİZELER
Rugta nolosha waa yar tahay. Waxaa jira waxyaabo badan oo aad u baahan tahay.
WAA MAXAY TAHAY IN AAD KA QABTO NABA FADLAN WAXBARASHOWAA MAXAY WAA MAXAY YIRAAHAN? FADLAN WAXBARASHOSIDA CUSUB EE CIYAARAHA SIDA AAD KA QAYB QAATU DHISMAYSO FADLAN WAXBARASHO
MUUQAALKAN: Numbers Jarmal
Sida lagu soo sharxay in Directory of Youth, dhalinyarada shaki ku jirin tegi doonaa. Summer ee dayrta iyo jiilaalka, oo maanta iyo isbeddel ku kat'iyet fiidkii iyo habeenkii meel, dhalinyarada beddeli doonaa xitaa da 'weyn iyo dhimasho. Haddii uu dhimanaya iyo dhalinyarada transient jihada hayrata Dhawrsoon Inkastoo saadka ee aqalka isaga la weligiis, ku guuleysan doono Fadliga injiilka dhallinyaro ah oo ay siin this dhan ah amarrada samaawi ah.
Aad iyo aad bay u fudud tahay inaad barato nambarro lambarro oo leh arrimo la yaab leh.
LAGU SAARO, LAMBARKA GUUD LAMBARKA FASAHA EE ZERO ilaa MILSILADA
Waligeed sidan uma fududaan si ay u bartaan saacadaha Jarmalka.
HALKAN KA DHAGEYSO, HADALKII GERMAN SAACADAHA HADA
Ku Baro Jarmalka rinjiyeynta midabka leh oo jumlado fudud uga dhig.
HALKAN KA DHAGEYSO, CARRADA GERMAN COLORS HADA
Ma dooneysaa inaad lacag ka sameyso internetka?
HALKAN KA DHAGEYSO, KA Baro siyaabaha aad lacag uga amaahan karto internetka
Jarmalka Turkish Kelimeler (M harfi)
Modalverben Jarmal, Indhaha Moodooyinka Maqalka, Modalverbler
Oraahyada barashada luqadda Jarmalka oo aan lahayn internet. SAACADAHA GERMAN markasta ...
Jumladaha Jarmalka, Qodobka Xeerka Jarmalka
[Jooji jawaabo faallooyinka]
FADLAN GALAYAASHA - 9 COMMENTS
si qarsoodi ah ayuu yiri:
yahuda ayuu yiri:
11 Oktoobar 2013, 02: 22
Waxaad ku sharaxday luqad aad u sharraxan, fudud oo qurux badan, macallin qaali ah. Caafimaad ee shaqadaada
Eeg Tusmada Faahfaahinta Fatma ayuu yiri:
06 Janaayo 2015, 22: 42
Waa inaan bartaa habeenkii wanaagsan ee Jarmalka, laakiin ma aqaan sida loo barto safka ugu fudud. Ma garanayo halka iyo sida loo bilaabo.
yesim ayuu yiri:
22 Janaayo 2015, 18: 53
Herr Stern / Gawracan
Miyaad iga caawin kartaa inaan erayadani isku dhafo oo aan caadi ahayn? mahad
Xirfadlayaal dheeri ah oo magaciisu yahay Murat Dogan ayuu yiri:
22 Oktoobar 2015, 10: 24
Waa goor dambe, laakiin aan u sheego jawaabaha.
Gaar ahaan H Grub Musik.
22 Oktoobar 2015, 10: 26
Waan ka xumahay, waan arkay qalad.
Fiiri Beyza Profile ayuu yiri:
08 November 2015, 11: 57
Miyuu jiraa bog ka hadlaya Jarmal ka wanaagsan?
Sena ayuu yiri:
22 Oktoobar 2017, 18: 58
Waxaan bilaabayaa inaan fahmo in aan kuu sheegayo fiirin aad u wanaagsan mawduuca waa la dhammeeyaa haddii mawduucu wakhti yar yahay oo ku daro tusaalayaal ii haddii aad ku darto
Arrimaha Soo Socda
Waa maxay Diinta Jarmalka? Diinkee bay Jarmalka aaminayaan?
Nidaamka Waxbarshada ee Jarmalka iyo Howlgalka Nidaamka Waxbarshada Jarmalka
Nolosha carruurta ee Jarmalka
Halkee bay Jarmalku kubixiyaan Lacagtooda? Nolosha Jarmalka
Waa maxay Xirfadaha Aad U Baahan ee Jarmalka? Maxaan ku sameyn karaa Jarmalka?
Su'aalaha imtixaanka ee Jarmalka
Arjiga Jarmalka - Game - Program
Imtixaanka Visa A1 ee Jarmalka iyo Isukeenida Qoyska
Jaamicada Jarmalka ee ugu caansan
Posts ugu dambeeyay
Re: Booqashada fiisaha 2020 iyo aagaga
Ingiriis Turjumaadda Jarmalka
Liisanka iyo Shuruudaha Isticmaalka
WhatsApp oo loogu talagalay PC